UZO ESI AMATA NJIRIMARA NKE KỌMPUTA GI, LAPTỌỌPỤ - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Network na Intaneti
Isi Azịza ajụjụ
Uzo esi amata njirimara nke kọmputa gi, laptọọpụ
Echere m na ọtụtụ ndị, mgbe ha na-arụ ọrụ na komputa ma ọ bụ laptọọpụ, ha nwere ajụjụ na-enweghị isi ma dị mfe: "otu esi achọpụta ụfọdụ njirimara nke kọmputa ...".
M ga-agwakwa gị na ajụjụ a na-etolite ugboro ugboro, na-emekarị n'ọnọdụ ndị a:
- mgbe ị na-achọ ma na-emelite ọkwọ ụgbọala (
- ọ bụrụ na ọ dị mkpa, chọpụta ọnọdụ okpomọkụ nke diski ike ma ọ bụ nhazi;
- na ọdịda ma kpọgidere PC;
- ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nye ihe ndị bụ isi nke components nke PC (dịka ọmụmaatụ, mgbe ịre ma ọ bụ na-egosi onye na-arụ ọrụ);
- mgbe ị na-etinye ihe omume, wdg.
Site n'ụzọ, mgbe ụfọdụ, ọ dị mkpa ọ bụghị naanị ịmata àgwà nke PC, kamakwa iji chọpụta nke ọma ihe nlereanya ahụ, mbipute, wdg. M maara na ọ dịghị onye na-edebe ihe ndị a na ebe nchekwa (na akwụkwọ ndị dị na PC enweghị ike ịdepụta paradaịs ndị a nwere ike ịmata ozugbo na Windows OS n'onwe ya 7, 8 ma ọ bụ jiri ụlọ ọrụ pụrụ iche).
Ya mere, ka anyi malite ...
Ihe di n'ime
Esi chọpụta àgwà nke kọmputa gị na Windows 7, 8
Ngwa ọrụ maka ilele àgwà nke kọmputa
4. Ọkachamara PC
N'ozuzu, ọbụna na-enweghị ojiji nke pụrụ iche. A na-enweta ọtụtụ ihe ọmụma banyere kọmpụta na Windows. Tụlee n'okpuru ọtụtụ ụzọ ...
Ụzọ # 1 - Iji Asusu Ozi Ịntanetị.
Usoro ahụ na-arụ ọrụ na Windows 7 na Windows 8.
1) Mepee taabụ "Run" (na Windows 7 na menu "Malite") wee tinye iwu "msinfo32" (na-enweghị ntinye ọnụ), pịa Tinye.
2) Na - esote, bido ọrụ bara uru, nke ị nwere ike ịchọpụta ihe niile bụ isi nke PC: Windows OS version, processor, laptop model (PC), wdg.
Site n'ụzọ, ịnwekwara ike ịmepụta ọrụ a site na menu Malite: Mmemme niile -> Standard -> Ngwaọrụ System -> Ozi System.
Nzọụkwụ nọmba 2 - site na nchịkwa nchịkwa (usoro njirimara)
1) Gaa na Ogwe Njikwa Windows wee gaa "Ngalaba na Nche" ngalaba, wee mepee taabụ "System".
2) A ga-emeghe windo nke ị nwere ike ịlele ozi gbasara isi PC: nke OS arụnyere, nke arụnyere nhazi, ole RAM, aha kọmputa, wdg.
Iji mepee taabụ a, ịnwere ike iji ụzọ ọzọ: pịa bọtịnụ "My Kọmputa" na họrọ aha na menu ndapụta.
Ọnụ ọgụgụ nke 3 - site na njikwa ngwaọrụ
1) Gaa na adreesị: Ogwe njikwa / System na Nche / Njikwa Ngwaọrụ (lee nseta ihuenyo n'okpuru).
2) Na njikwa ngwaọrụ, ị nwere ike ịhụ ọ bụghị naanị akụkụ niile nke PC, kamakwa nsogbu na ndị ọkwọ ụgbọala: na-eche ihu ngwaọrụ ndị ahụ ebe ihe niile adịghị n'usoro, akara ụcha ma ọ bụ uhie na-acha ọkụ.
Usoro # 4 - Ngwa DirectX Diagnostic Tools
Nhọrọ a na-elekwasị anya na njirimara ọdịyo nke kọmputa.
1) Mepee taabụ "Run" ma tinye iwu "dxdiag.exe" (na Windows 7 na Malite menu). Wee pịa Tinye.
2) Na window DirectX diagnostic Tool window, ị nwere ike ịmatakwu akụkụ nke igodo vidiyo, usoro nhazi, ọnụ ọgụgụ faịlụ, usoro Windows OS, na mpaghara ndị ọzọ.
N'ozuzu, e nwere ọtụtụ ihe ndị yiri ya: ma akwụ ụgwọ na n'efu. Na obere nyocha a, m kwuru maka ndị ọ kachasị mfe ịrụ ọrụ (n'echiche m, ọ bụ ha kachasị mma). N'okwu m, m na-ezo aka ugboro ugboro (ma m ka ga-ezo aka) ...
Site na saịtị: http://www.piriform.com/speccy/download (site na ụzọ, e nwere ọtụtụ nsụgharị nke mmemme iji họrọ)
Otu n'ime ụlọ ọrụ kasị mma maka taa! Nke mbụ, ọ bụ n'efu; nke abụọ, ọ na-akwado nnukwu ngwá ọrụ (netbooks, laptọọpụ, kọmputa nke ụdị dị iche iche na mgbanwe); nke atọ, na Russian.
N'ikpeazụ, ị nwere ike ịchọpụta ihe niile bụ isi gbasara ọdịdị nke kọmputa ahụ: ozi gbasara usoro nhazi, sistemụ arụmọrụ, RAM, ngwaọrụ dị nro, okpomọkụ na-arụ ọrụ na HDD, wdg.
Site n'ụzọ, ebe nrụọrụ weebụ na-emepụta nwere ọtụtụ nsụgharị nke mmemme: gụnyere obere (nke anaghị mkpa ka a rụnye ya).
Ee, Speccy na-arụ ọrụ niile na Windows: XP, Vista, 7, 8 (32 na 64 ibe).
Site na saịtị: http://www.lavalys.com/support/downloads/
Otu n'ime ihe omume ndị a ma ama nke ụdị ya otu ugboro. Eziokwu bụ, ya ewu ewu dị ntakịrị ụra, ma ...
Na ọrụ a, ọ bụghị naanị na ị ga-enwe ike ịchọpụta àgwà nke kọmputa, kamakwa ụyọkọ nke ozi dị mkpa na nke na-adịghị mkpa. Karịsịa, nkwado zuru ezu nke asụsụ Russian, n'ọtụtụ mmemme a anaghị ahụkarị nke a. Ụfọdụ n'ime atụmatụ kachasị mkpa nke usoro ihe omume ahụ (enweghị ụdị pụrụ iche ịdebanye ha niile):
1) Ikike ike ile okpomọkụ nke nhazi. Site n'ụzọ, nke a bụrịrị isiokwu dị iche:
2) Na-edezi mmemme ndị nwere ike ibudata. Ọtụtụ mgbe, kọmputa ahụ na-amalite ịda mbà n'ihi n'eziokwu na a na-ede ọtụtụ ihe ndị dị mkpa ka ha buru ibu, nke ọtụtụ ndị mmadụ adịghị mkpa na ọrụ kwa ụbọchị maka PC! Banyere esi agba ọsọ Windows, e nwere ọkwa dị iche.
3) Nkewa na ngwaọrụ niile ejikọrọ. N'ihi ya, ị nwere ike ikpebi ihe nlereanya nke ngwaọrụ ejikọrọ, wee chọta onye ọkwọ ụgbọala ị chọrọ! N'agbanyeghị, usoro ihe omume ahụ na-eme ka ọbụna njikọ ebe ị nwere ike ibudata ma melite ọkwọ ụgbọala ahụ. Ọ dị mfe, karịsịa ebe ọ bụ na ndị ọkwọ ụgbọala na-abụkarị ụta maka PC na-adịghị eguzosi ike.
Site na saịtị: http://www.hwinfo.com/
A bara uru ma dị ike. O nwere ike inye ihe ọmụma karịa nke Everest, naanị enweghi asụsụ Russian na-ewute.
Dịka ọmụmaatụ, site na ụzọ, ma ọ bụrụ na ị na-ele ihe mmetụta na okpomọkụ, mgbe ahụ na-esote ihe ngosi ndị dị ugbu a, usoro ihe omume ahụ ga-egosiputa kachasị maka maka ngwá ọrụ gị. Ọ bụrụ na ọkwa dị ugbu a dị nso - enwere ihe iche iche ...
Ọrụ na-arụ ọrụ ngwa ngwa, a na-anakọta ozi na nkịtị. Enwere nkwado maka sistemụ arụmọrụ dị iche iche: XP, Vista, 7.
Ọ dị mma, site n'ụzọ, imelite onye ọkwọ ụgbọala ahụ, ọrụ ahụ dị n'okpuru ebe a na-ebipụta njikọ na ebe nrụọrụ weebụ nke onye na-emepụta ihe, na-azọpụta gị oge.
Site n'ụzọ, nseta ihuenyo dị n'aka ekpe na-egosi nchịkọta nchịkọta gbasara PC, nke gosipụtara ngwa ngwa mgbe ebusịrị ọrụ ahụ.
Site na saịtị: http://www.cpuid.com/softwares/pc-wizard.html (jikọọ na peeji nke na usoro ahụ)
Ikike bara uru iji lee ọtụtụ mpaghara na àgwà nke PC. N'ebe a, ị nwere ike ịchọta nhazi nke usoro ihe omume ahụ, ozi gbasara ngwaike, na ọbụna nwaa ụfọdụ ngwaọrụ: dịka ọmụmaatụ, onye nhazi. Site n'ụzọ, ọ bara uru ịchọrọ na ọkachamara PC, ma ọ bụrụ na ị chọghị ya, nwere ike belata ngwa ngwa na ọrụ ọrụ, mgbe ụfọdụ na-ejikọta na akara ngosi.
Enwerekwa ọghọm ... Ọ na-ewe oge dị ukwuu iji kwụọ ụgwọ mgbe mbụ ịmalite (ihe dị ka nkeji ole na ole). Ọzọkwa, mgbe ụfọdụ, ihe omume ahụ na-ebelata, na-egosipụta àgwà nke kọmputa na oge. N'ikwu eziokwu, ọ na-enye nsogbu ichere maka 10-20 sekọnd, mgbe ị pịachara ihe ọ bụla si na mpaghara ọnụ ọgụgụ. Ihe ndị ọzọ bụ ọrụ bara uru. Ọ bụrụ na njirimara ahụ dị ntakịrị - ọ bụrụ na ị nwere ike iji ya mee ihe n'enweghị nsogbu!
Site n'ụzọ, ịnwere ike ịchọta ụfọdụ ozi gbasara kọmpụta na BIOS: dịka ọmụmaatụ, ụdị nhazi, diski ike, akpa laptọọpụ, na akụkụ ndị ọzọ.
Aptop Pọkspeet ASPIRE. Ozi gbasara kọmputa na BIOS.
Echere m na ọ ga-abara uru iji jikọta otu isiokwu gbasara ụzọ e si abanye BIOS (maka ndị nrụpụta dị iche iche - bọtịnụ nbanye dị iche iche!):
Kedu ụzọ, ọrụ ndị dị aṅaa iji lelee àgwà nke PC?
Enwere m ihe niile na ya taa. Ezigbo onye ọ bụla!
Ịhọrọ usoro ihe omume
Editor Si NhọRọ
Nhazi software nke 3D
Oputara MDB database
Esi ehichapụ paswọọdụ echekwara site na Yandex Browser
Dee PDF n'ime ibe weebụ
Mepụta baajị n'Ịntanet
Ndozi na mweghachi
Otu n'ime nsogbu ndị nwere ike ịchọta mgbe ị wụnye Windows 10 bụ ihe ijuanya karịa akwụkwọ Russian na mmemme ihe omume ahụ, yana akwụkwọ. Ugboro ugboro, ezighi ezi ngosi nke mkpụrụ okwu Cyrillic dị na nsụgharị nke asụsụ Bekee ma ọ bụ ndị a na-enyeghị ikikere, ma e nwere ndị ọzọ. GụKwuo
Ihichapu otu na Steam
Otu esi enweta ntuziaka na Google Maps
WindowsAzịza ajụjụNsogbu egwuregwuNetwork na IntanetiAkụkọIsiokwuVideo na ọdịyoOkwuExcelNjikarịcha WindowsN'ihi beginnersAptọọpụNdozi na mweghachiNchedo (nje)Ngwa mkpanakaOfficeNchọgharịMmemmeKọmputa nhichaIOS na MacOSỊchọta ígwèDiskNsogbuSkypeBluetoothArchiversSmartphonesNjehieỤdaNdị ọkwọ ụgbọala
https://termotools.com ig.termotools.com © Azịza ajụjụ 2019